မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမြင်ရင် ယောက်ျားတွေဘယ်အရာကို အဓိကထား ကြည့်လဲ? – Trend.com.mm
ပြည့်စုံအောင် လှနေတာမျိုး မိန်းကလေးတိုင်း လိုချင်တာပေါ့။ ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ ဘယ်လိုအရာတွေပေါ် အာရုံစိုက်တတ်ကြလဲ ? တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့ မတူနိုင်ဘူးပေါ့လေ။ များသောအားဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘယ်နေရာ ၊ ဘာဆိုတာကို အသေးစိတ် လိုက်ကြည့်တာတော့ ရှားပါတယ်။ သူတို့ သတိထားမိတာက မျက်နှာလေးနဲ့ မင်းဘယ်လိုပုံစံ ဝတ်စားဆင်ယင်ထားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်လေးတွေပဲ သူတို့ သတိထားကြည့်ကြတာပါပဲ။ ဗိုက်လေး ပူနေလို့ တွေ့တဲ့အခါကြ အသက်အောင့် ဗိုက်ချပ်ထားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့.. 😋😋
အဲ့ဒီ ကိုယ်သင်းနံ့က သူတို့နှာခေါင်းထဲမှာ စွဲနေပြီဆိုရင် အနံ့ရတာနဲ့ လူမလာသေးခင် သူတို့အနီးတစ်ဝှိက် မင်းရောက်နေပြီဆိုတာ ကြိုသိနေတယ်။ ယောက်ျားလေး တော်တော်များများ အနံ့သင်းတာကို ကြိုက်ပါတယ်။ အရမ်းပြင်းတဲ့ ရေမွှေးတွေ စွတ်ထားရင်တော့ သူတို့ခေါင်းမူးတယ်။ ကြိုက်ဘူး။😒
သိကြတဲ့အတိုင်း မိတ်ကပ်ထူလပျစ်ကြီးတွေက သူတို့ရင်ကို ပူစေပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင် မျက်နှာလေးရှင်းပြီး သူတို့ရင်ထဲ အေးချမ်းသွားမယ့် မိန်းကလေးမျိုးကို ပိုသတိထားမိကြတယ်။ 😉ဒါကြောင့် နည်းနည်းလေးအရောင်တောက် ခြယ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား တွေးနေတဲ့ မမနဲ့ ညီမလေးများ အခြေအနေနဲ့ အချိန်ခါလိုက်ပြီး ပြင်တတ်၊ ဆင်တတ်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။ မိတ်ကပ်တွေ ၊ အရောင်တွေ အရမ်းမသုံးမိပါစေနဲ့နော် ။
အသားရည်က ဖြူဖြူ ၊ မည်းမည်း ၊ ညိုညို စိုပြေနေတာလေးဆို သူတို့လွယ်လွယ် သတိထားမိကြသတဲ့။ လူတိုင်း အကောင်းတော့ ကြိုက်တာပေါ့နော်။ 😀😀မျက်နှာလေး ဝင်းမွတ်ပြီး ပြောင်ချော်နေတာမျိုိးဆိုလည်း သတိထားမိတတ်ကြပါတယ်။ ဝက်ခြံတွေ ၊ အဖုဖိမ့်တွေဆို ယောက်ျားလေးတွေအမြင်မှာ မင်းဟာ အရောင်မှိတ်နေတတ်ပါတယ်။ အရောင်စိုချင် အသားရည်လေးလည်း လှအောင်နေမှရပါမယ်။
ခြေတံသွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကို သူတို့ အရမ်းသတိထားမိလွယ်ပါတယ်။ ခြေတံသွယ်သွယ်လေးကိုမှ စိုဝင်း ချောမွတ်နေတဲ့ ခြေတံလေးပေါ့။ 😍မိန်းကလေးဆိုတာလည်း သန့်ရှင်းနေမှဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ့်ခြေထောက်လေးကြည့်လိုက်တိုင်း လှနေစေဖို့ သေချာသန့်စင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။
တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေ ကြည့်လိုက်ရင် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတယ်။ ဝတ်စားဆင်ယင်ထားတဲ့ ပုံစံလေးတွေကလည်း လွတ်လပ်မှုရှိတာကိုး။ လည်ပင်းကျယ်တဲ့ အကျီ င်္မျိုးတွေ ၊ လက်ပြတ်လေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေ မျက်လုံးထဲ ပိုထင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ အပေါ်နဲ့ အောက် စပ်ဆက်မှုရှိတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးကို သူတို့နှစ်သက်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မင်းမှာ အကြောပြတ်ရာရှိတယ်ဆိုရင် သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒီလိုအကြောပြတ်ရာကို မြင်လို့ သူစိတ်ထဲလည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့် ဒီလိုအကြောပြတ်ရာ ဖြစ်နေလည်းဆိုတာကို သူတို့သေချာစဉ်းစားနေမှာမဟုတ်သလို ၊ ဒီအကြောပြတ်ရာက သူတို့အတွက် ပိုတောင်ကြည့်ကောင်းနေတတ်ပါတယ်။
ဆဲတယ် ဆိုတဲ့အရာက ကောင်းတော့မကောင်းပါဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် ရုတ်တရက်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အခြေအနေပေါ် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆဲသံကို သူတို့ သတိထားကြပါတယ်။ စကားပြောတိုင်း ”ေ-ာက် ” ကိုမချတော့တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ပါးစပ်က အမှတ်မထင်ထွက်ကျလာတဲ့ ဆဲသံလေးကို ပြောတာပါ။
၈ဝရာခိုင်နှုန်းသော ယောက်ျားတွေက ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ မိန်းကလေးကို မကြိုက်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့်တချို့ ယောက်ျားတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဆေးလိပ်သောက်တာ မထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ၊လွပ်လပ်ပိုင်ခွင့် တစ်ခုလို့ပဲ သူတို့မြင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တိုင်း သူမဟာ မကောင်းတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်လို့ သူတို့ မသတ်မှတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပဲမို့ ဒီလိုပုံစံက သူတို့မျက်လုံးထဲပိုတောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတတ်ပါတယ်။